Posted by ကိုဆက် ကြီး on August 14, 2013
1...Right click on the desktop - new- shortcut.
2...type the location of item မှာ shutdown -s ကိုရေးပြီး next ပြီးရင် typeaname for shorcut
မှာ Virus မှန်းမသိအောင် Mozilla Firefox လို့ရေးပါပြီးတော့ finish.
3...ဒီ Mozilla Firefox ကို Right click နှိပ်ပြီး Properties မှာ Change Icon ကိုသွားပြီးတော့
Mozilla Firefox ပုံလေးကိုရွေးပြီး ok ပေး။
ဒါဆိုရင် အောက်ပါပုံအတိုင်း Desktop မှာ ပေါ်လာပြီး
ဒါကို Open လုပ်လိုက်ရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း
ပေါ်ပြီးတော့ ကွန်ပျုတာ သူ့အလိုအလျောက်
Run-cmd-shutdown -a ကိုရိုက်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင်ပျောက် သွားပါလိမ့်မယ်။ ကွန်ပျုတာ အလိုအလျှောက်မပိတ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့အပေါ်က ပုံမှာ တွေ့တဲ့အတိုင်း Time before shutdown မှာ စက္ကန့်တွေ 00 မဖြစ်သွားခင် အမြန်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
သတိထားရန်---သူများကို ဒုက္ခပေးရင် ကိုယ်ပြန်ခံရပါမယ်၊